Mpanamboatra sy mpamatsy Pet Wipe China | Haicheng
Sava lalana Fanomezana ho an'ny orinasa manokana logo OEM fampiasa maro samihafa famafazana biby an-tsokosoko alika voafafa tsy mandro, alika, paw, sofina, maso, fanadiovana nify ary fanadiovana ny biby famonoana biby.
Karazana Afaka diovina maina izy io
Description Hamafa ny biby fiompy
TECHNOLOGY tenona tsotra, tenona perila, harato, sary sokitra
famaritana 20pcs 30pcs 40pcs 50pcs 60pcs 80pcs 100pcs 160pcs
Fampiasana Sokafy ny tombo-kase wipe lena, fafao amin'ny safo lena ny biby fiompy mandritra ny 10 segondra, famonoana biby
Votoatin'ny singa mavitrika Benzalkonium Chloride Spunlace lamba tsy misy tenona
Fampidirana: ny fanasana biby dia fanasana mora vidy - vokatra maimaim-poana hanadiovana sy hamonoana biby fiompy. Afaka manadio ny vatan'ny biby fiompy, hoho, sofina, maso, nify ary mandray anjara amin'ny famonoana otrikaretina, hisorohana ny aretina biby, ary hiarovana ny fahasalaman'ny ny biby. Ary tsy mahazaka biby fiompy izany. Hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa OEM sy ODM izahay, hamaritra ny lanja tsy lanja, habe, tsiro ho fanaingoana, afaka misafidy lamba fisaka, lamba perla, harato, lamba fisaka ary hazo fijaliana koa. Famaritana ananantsika: 20cm 30 pcs 40 pcs 50pcs 60pcs 80pcs 100pcs 160pcs, na arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa. Ireo akora tsy voatanisa dia lamba vita amin'ny rano avo lenta tsy voatenona, famono otrikaretina biolojika, dia tokony hosedraina alohan'ny fitehirizana. Ny fitaovam-pamokarantsika dia milina famafana soloina mandeha ho azy tanteraka, manomboka amin'ny singa tokana ka hatramin'ny maro, manomboka amin'ny kitapo ka hatrany amin'ny barika, dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famokarana. Ny atrikasa famokarana dia atrikasa madio tsy misy vovoka, mandeha ho azy ny fizotrany tsirairay avy, hiantohana ny fahadiovan'ny rohy famokarana sy ny fitoniana kalitao ary ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny famokarana. Manana ekipa teknisiana matihanina izahay, hiantohana ny fiasan'ny tsipika fivoriambe isaky ny famokarana, tena hentitra izahay amin'ny fenitra fitsirihana, manomboka amin'ny fanodinam-bokatra ny akora ka hatramin'ny fanaterana ny vokatra, ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso dia manana lalàna sy fitsipika henjana ary fanaraha-maso. fenitra, hahazoana antoka fa ny vokatra tsy mendrika dia tsy hiala amin'ny orinasa.Rehefa fito ambin'ny folo taona ny fampandrosoana, ny orinasa no nahazo ny famokarana mari-pahaizana ny hamafa biby, ny fanamarinana iraisam-pirenena ary ny fanandramana antoko fahatelo. Miaraka amin'ny ekipa mpivarotra raharaham-barotra vahiny matihanina sy mpivarotra fahazoan-dàlana, afaka mandalo sy mitatitra vokatra mahafeno fepetra mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipiky ny firenena samihafa izahay, hahazoana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ny aorianay - serivisy fivarotana dia tena eo an-toerana ihany koa, 24 ora an-tserasera, amin'ny fotoana rehetra hanampiana ny mpanjifa hamaha olana sarotra amin'ny fotoana rehetra. Ny vokatray dia niara-niasa tamim-pifaliana tamin'ny mpanjifa tany Japon, Azia atsimo atsinanana, Hong Kong, Eoropa ary hafa. Ho an'ny vokatra namboarina dia mitaky ny mpanjifa hampandroso ny fandoavam-bola ny orinasa, ary handoa ny fifandanjana amin'ny faktiora amin'ny fandefasana, miantoka ny zon'ny ara-dalàna sy ny tombotsoan'ny andaniny roa.
1 mamafa ny biby fiompy 20 pcs / kitapo 5bag / boaty, boaty 20 / baoritra, 1100cases / 40 HQ
2 mamafa ny biby fiompy 30 pcs / kitapo 5bag / boaty, boaty 20 / baoritra, 850cases / 40 HQ
3 mamafa ny biby fiompy 40 pcs / kitapo 50bags / carton, 1700cases / 40 HQ
4 mamafa ny biby fiompy 50 pcs / kitapo 40bags / carton, 1750cases / 40 HQ
5 mamafa ny biby fiompy 60 pcs / kitapo 30bags / carton, 1800cases / 40 HQ
6 mamafa ny biby fiompy 80pcs / kitapo 25bags / carton, 1700cases / 40 HQ
7 mamafa ny biby fiompy 100 pcs / kitapo 20bags / carton, 1500cases / 40 HQ
8 mamafa ny biby fiompy 100 pcs / siny 20buckets / carton, 1350cases / 40 HQ
9 mamafa ny biby fiompy 160pcs / siny 12buckets / baoritra, 1440cases / 40 HQ
Sehatra fampiharana:alika organika, saka, paw, sofina, maso, nify fanadiovana sy famonoana otrikaretina mpanadio biby
Teo aloha: Lubricants manokana
Manaraka: Mamafa lamba fanadiovan-dakozia